Barcelona oo ku guuldareesatay inay guul ka gaarto horyaalka La Liga afar kulan ee xiriir ah, kadib markii ay barbaro la gashay Valencia – Gool FM
Barcelona oo ku guuldareesatay inay guul ka gaarto horyaalka La Liga afar kulan ee xiriir ah, kadib markii ay barbaro la gashay Valencia
CR Shariif October 7, 2018
(La Liga) 07 Okt 2018. Kooxda Barcelona ayaa ku guuldareesatay in wax guul ah ay ka gaarto horyaalka La Liga ee dalka Spain kulankeeda 4-aad ee xiriir ah kadib markii ay barbaro 1-1 ah kala soo laabatay Mestalla Stadium ee kooxda Valencia.
Kooxaha Valencia iyo Barcelona ayaa kulankan ku bilaawday si xiiso badan, xili kulankan ay kooxda Blaugrana u baahneed inay guul gaarto si ay kaga faa’ideysato guuldaradii Real Madrid kasoo gaartay Deportivo Alavés kulankooda 8-aad ee horyaalka La Liga xili ciyaareedkan..
Labada dhinac ayaa waxay qeybtii hore ee ciyaarta sameeyeen fursado cajiib ah, xili ciyaarta ay ahayd weerar iyo weerar celis, waxayna inta badan adeegsanayeen kubado gaadmo ah.
Daqiiqadii 2-aad ee bilawga qeybtii hore ciyaarta kooxda Valencia oo ku dhex ciyaareysa jamaahiirteeda ayaa la timid goolka daah furka ciyaarta waxaana u dhaliyay difaacii hore kooxda Real Madrid ee Ezequiel Garay, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0.
Laakiin daqiiqadii 23-aad Barcelona ayaa dhalisay goolka barbaraha waxaana u dhaliyay Lionel Messi, kadib markii uu ka caawiyay Luis Suarez ciyaarta ayaana noqotay batbaro 1-1.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 1-1 maadaama labada kooxood ee Valencia iyo Barcelona ay ku guuldareesteen inay iska dhaliyaan goolal kale.
Marka dib leysigu soo laabtay qeybta labaad ayay labada kooxood Valencia iyo Barcelona sameeyeen isku dayo kale ee weerar iyo weerar celis ah, xili jamaahiirta labada dhinac ee ku sugneed Mestalla Stadium ay sugayeen cida dhalin doonta goolka hogaanka ee ciyaarta.
Ugu dambeyn ciyaarta ayaa kusoo idlaatay barbaro 1-1 ay labada kooxood Valencia iyo Barcelona ay isku dhaafi waayeen kulankoodan 8-aad ee horyaalka La Liga, xili Barca ay iska lumisay fursad ay kusii dheereysan lahayd horaanka dhanka kala sareynta horyaalka.
Unai Emery oo hoos u dhigay fursada ay kooxda Arsenal ugu dagaalami karto horyaalka Premier League
Muxuu ka yiri tababaraha Liverpool ee Jürgen Klopp barbarihii ay Manchester City kula galeen garoonka Anfield?